Features - ukubona indlela njengamaza ROM Lixesha akhathazeke
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Features - ukubona indlela njengamaza ROM Lixesha akhathazeke
Kwi pa parlour, ngaba ucinga ukuba neqonga akuzi kakhulu. Kungenjalo, kuba bekuya kuba yinto akuthethi kuthi intengiso of pa parlour. Ngo, njengoko amanyathelo ezingaqhelekanga kakhulu, nesendlu pa ezinjalo, siza kwazisa indlela ukubona kusini itheyibhile iimpawu.
uya eqonda ngoko nangoko ukuba xa ukhangela.
akhathazeke itheyibhile osemqoka engcono kukuba iziyobisi ngaphezu nantoni ngokuva. Xa amaxesha 1000 kwaye umngcangcazelisi ibekwe kwi Zara singenziwa kuma iziyobisi izihlandlo 2,000. Ngaphakathi kule ROM ngexesha meko, ukuthetha umzekelo, yimeko, ezifana okuphumelela uye emva naphambili ziye imo kwamcaphukisa.
nibuyele ubomi obuqhelekileyo, kwaye kudla ngokwenzeka kube lixesha elide. ixesha enomsindo, loo nto iya kuba kwi non-karhulumente onke, ndicinga ukuba kube lula ukuyiqonda. Kukho kakuhle xesha, kukuba inani kwezenzeko ze imveliso leyo wancipha.
kwixesha oluqhelekileyo, kodwa yemveliso rhoqo alizukuvela, kwixesha enomsindo, imveliso ngokwayo iya isiba nzima ukuhamba. Isiphumo it off, weza nayo phandle kufikelela umboniso, kungekudala siza kuphela ngaphandle naluphi uphuhliso.
Ukongeza, ukuba ekugqibeleni ivaliwe jackpot, okanye ukuphela kwenye enye, ijonge okanye isiphelo kwi tsala-umva zange kwaye linokuba ukwahluka nakanye kwi iiyure zokusebenza ezimfutshane. Emva koko, uya Iziginyile zonke ekudala elindelwe yawo kwaphuma bhokisi, nayo kuye kwayimfuneko utyalo-mali. Ukusuka apho, kuya kubakho umjikelo ekrakra okanye iziyobisi iqala. Kuya kuba iimpawu ukuhamba xesha kwamcaphukisa.
e elibe pa, kuba loo itheyibhile imeko embi kaninzi ilungileyo, nam ndiya cinga iqashiso nakho okungcono uke hit phezu kwamanqwanqwa enjalo. Noko ke, loo nto ayenzi ingqondo ukwazi emva ndakubetha. flow Kwezona elinde, loo isifo kwisigaba flow sele uqinisekile ukuba ibe ngcono ukwazi phambi kokuba hits. Xa
Oku kuluncedo ukuba Robo data kunye counter data. data neviniga Jonga igrafu yesibane ngokuphandle icaciswa akhathazeke-ubomi. Idatha ye yitafile kwixesha ekuzeni enjalo, igrafu, ndicinga ukuba kude ngezantsi komgca osembindini. Ekubeni
ubomi ekhathazekile kuye kwaba kubi jackpot amathuba kwitafile ende, zama ukukhangela kunye. Ukongeza, iqonga eziye kunye neempawu ezifana nomsindo-ebomini, kukho amaxesha xa sele ngabom wachacha machine elibe pa.
okanye nje kuphela ukuba ukuwa ukuhamba, ndicinga ukuba kuhle ukuba ukufumanisa kukho imfuneko nokuba ezinjalo kuba benza umatshini ekuphulukenwe nalo. Nangona kunjalo, kakhulu elandelwa nguqulelo xesha kwamcaphukisa.
ukuba ndinyuke nge onjalo kwisigaba disorder iimpawu, kwelo tyala kuye kwalandelwa kweentsuku ezimbalwa, nayo ingqalelo ukuba ukuqhubeka shift ubomi obuqhelekileyo kunye nexesha elihle. Xa sele ube utyekelo unyuko kancinane igrafu kancinane, ndicinga ukuba ezandleni ukuva indlela zama hit encinane ukuzama. Ukuba kukho
ukubona ngokuqinileyo kumda kwexesha olunamandla ubuchwephesha enomsindo-ubomi, Ngubani na kusenokwenzeka ukuba umntu omnye kuphela amadlavu Ukuphumelela kwisiqithi isiphelo ukuya kujongana avulekela angababoni. Platform, leyo wangena ngokucacileyo ngethuba womelele, kuba nathi loya ubandezele, asikwazi kuba njalo lula ukufumana. Ukuze athi ukuba
, lwabaqalayo, kunzima kakhulu kukuba ukubona kumda kwexesha kakhulu ukusuka kwixesha ngesiquphe nomsindo, ingozi entle kakhulu. Unoko engqondweni, uya itafile esicinga ukuba ixesha liphinde ngendlela yangoku ngcembe, kubhetele ukuba xa kuvela ithuba lokuba isiseko kuMthengi interchanged eseleyo uzinzile. Ndicinga ukuba kukho imfuneko ukufumana phandle kakuhle kakhulu. Nangona kunjalo, kakhulu elandelwa nguqulelo xesha kwamcaphukisa.
, lwabaqalayo, kunzima kakhulu kukuba ukubona kumda kwexesha kakhulu ukusuka kwixesha ngesiquphe nomsindo, ingozi entle kakhulu. Unoko engqondweni, uya itafile esicinga ukuba ixesha liphinde ngendlela yangoku ngcembe, kubhetele ukuba xa kuvela ithuba lokuba isiseko kuMthengi interchanged eseleyo uzinzile.